ရခိုင်ပြည်က ပြဿနာ ဝိုင်းငြိမ်းကြရာမှာ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ပါ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင်ပြည်က ပြဿနာ ဝိုင်းငြိမ်းကြရာမှာ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ပါ
မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင် ပြည်တွင်းစစ် (အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သောစစ်)မှလွဲ၍ လူမျိုးရေးစစ်ပွဲ ၊ ဘာသာ ရေးစစ်ပွဲများမရှိခဲ့ဘဲ ဘာသာခြားတွေ ၊ ယုံကြည်မှုကွဲပြားသူတွေ နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်လာ ခဲ့ကြသည်။
မည်သို့ပင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေ ခြားနားကြပါစေ မြန်မာ့မြေပေါ် ကြီးပြင်းလာခဲ့သူများဟာ တပြည်တည်းနေ ၊ တမြေ တည်း ကြီး ၊ တရေတည်းသောက်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ မိမိတို့မြေပေါ် ကျူးကျော်လာသူ ၊ မိမိတို့နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိပါးလာသူများအား ဝိုင်းဝန်းနှိမ်နင်းရန်မှာ ဤမြေပေါ် ကြီးပြင်းလာကြသော နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်မှ အရေးအခင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်နေကြသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတို့နှင့် မြန်မာတိုင်း ရင်းသား ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ အရေးအခင်းမို့ မြန်မာ့မြေပေါ် ကြီးပြင်းလာသော ဘာသာတူသူ ၊ မတူသူတို့ အတူတကွ မြန်မာ့ မြေ အား ကာကွယ်သွားရမည့်အရေးဖြစ်သည်။
အဓိကမှာ ကျူးကျော်လာသူများ ၊ ဆူပူအောင်ပြုလုပ်နေသူများ ၊ လက်နက်သုံး တိုက်ခိုက်နေသူများ ၊ လူအများ အိုးအိမ်မဲ့ အောင် ၊ သေကြေအောင် ၊ ဒုက္ခရောက်အောင် ပြုနေသူများအား ဘာသာတူသူ ၊ မတူသူတွေ စည်းစည်း လုံးလုံး နှိမ်နင်း သွားကြဖို့ပင်ဖြစ်သည်။
အချင်းချင်း ဆဲဆို ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ် ၊ အမုန်းပွားနေရုံဖြင့် လောင်နေသော ရန်မီးမှာ မငြိမ်းနိုင် ။ တိုး၍လောင်ဖို့သာ ရှိသည်။ သို့ အတွက် သတိရှိကြစေချင်သည်။ ပြည်ပျက်စေအောင် လှုံ့ဆော်သူများ၏ အရေးအသား ၊ အဆဲအဆို ၊ ရန်အစ မှာ မျောမသွားစေလို ။ လိုက်ပါ ရန်မကြွစေလို။
ထိုလူမျိုးခြားအချင်းချင်း ဖြစ်ပွားသော ပြဿနာသည် ဘာသာခြားအချင်းချင်း ဖြစ်ပွားသော ဘာသာရေးပြဿနာမဟုတ် ။ ဘာသာရေးအသွင်သို့ ကူးပြောင်းသွားစရာလဲ မလို ။ ထိုဘာသာခြားအချင်းချင်း စော်ကား အမုန်းပွားဖို့လဲ မလို ။
ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်များ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှါ အခြားဘာသာဝင်များအား ညှဉ်းဆဲ သတ်ဖြတ်ပြစရာ မလို ။ ဆဲဆိုရန်လိုနေစရာမလို ။ ထိုလမ်းသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင် နေသည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် သူတပါးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို အားမပေးခဲ့။ ထို့အတွက် စကားဖြင့် အနိုင်ရရုံ ဆဲဆို ၊ ရန်စ ၊ သတ်ဖြတ်ကြဖို့ ပြောဆိုမြှောက်ပင့်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်တို့၏ လုပ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်း သတိထားသင့်သည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာအစွန်းရောက်များ သတိထားရမည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံထဲ ကြီးပြင်းနေထိုင်ပြီး တခြားဘာသာကို အစွန်းရောက် သက်ဝင်ယုံကြည်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား မုန်းတီးရန်လိုနေပါက အကောင်းဆုံးအကြံပေးလိုသည်မှာ သင်တို့ ဘာသာဝင်များ အများဆုံးနေထိုင်ရာ နိုင်ငံများတွင်သာ ဘာသာတူအချင်းချင်း စုရုံးနေထိုင်သွားကြပါ။ ဒါက သင်တို့ကိုးကွယ်သော ဘာသာအတွက်သော်လည်းကောင်း ၊ သင်တို့ယုံကြည်မှုအတွက် သော်လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သော်လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်သော် လည်း ကောင်း အဘက်ဘက်မှ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်တို့ လူမျိုးနှင့် ဘာသာကိုထိလျှင် သင်တို့နာသလို ကျွန်ုပ်တို့ မြေပေါ်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာကို စော်ကားလျှင် ၊ ကျွန်ုပ်တို့ လူမျိုးတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့လဲ အနာကြီးနာ သည်။ ဒါကို သတိရှိပါစေ။
This entry was posted on January 24, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ၂၀၀၇ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုစည်သူမောင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်B.Econ(stat) တတိယနှစ်ပုံမှန်အတန်းမှာဆက်လက်ပညာ သင်ကြားခွင့် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရ …
ကျမ ဘယ်တော့မှ ကုလားလို့ မခေါ်ဘူး။ →